DISTRIKAN’I SAMBAVA : Tovolahy vao 25 taona novonoina tamin’ny fomba feno habibiana
Manjaka ny famonoana olona amin’ny fomba feno habibiana any amin’ny Distrikan’i Sambava amin’izao fotoana. 18 mai 2017
Ny 18 avrily lasa teo no nahitana faty nampiahiahy tamin’ny tokotanin’ny Epp Antanifotsy, afak’omaly maraina indray kosa dia tovolahy efa tapaka loha no nisy nahita tao amin’ny Fokontany Ampandrozonana ao an-tampotanànan’i Sambava.
Araka ny vaovao voaray avy any an-toerana, notsindronina antsy ny lohan’ ilay tovolahy ka loaka, ary nofiraina antsy koa ny tendany ka tapaka. Olona sendra nandalo no nahita ny razana tany anaty ahitra. Mbola hita niaraka taminy teo avokoa ny antsy kely iray sy fibara lava ary nisy tady kely ihany koa, raha ny vaovao voaray ihany. Mbola teny an-kodiny ny akanjony, fa feno fira antsy ny vatany.
Tonga nijery ny razana ny mpitandro filaminana ao an-toerana sy ny mpitsabo. Nilaza ilay mpitsabo fa ny alatsinainy alina no namonoana ny tovolahy ary tany amin’ny toeran-kafa satria efa madio ireo antsy vao nariana niaraka tamin’ilay razana teo amin’ny toerana nahitana ny vatana mangatsiaka, raha ny vaovao avy any an-toerana izay hatrany.
Hatreto aloha dia mbola tsy fantatra ny tena antony namonoana ity tovolahy vao 25 taona ity. Efa misokatra kosa ny fanadihadiana ataon’ny mpitandro filaminana ao an-toerana, raha ny loharanom-baovao hatrany. Tovolahy avy ao Sambava ihany io namoy ainy io, mampihaihay ny maro kosa ny fomba namonoana azy io ka raiki-tahotra avokoa amin’izao fotoana ny mponina any an-toerana satria mateti-pitranga loatra, hoy izy ireo, ny famonoana olona mahatsiravina toy izao.
Manentana ireo vahoaka ao an-toerana kosa ny mpitandro filaminana mba hampilaza rehefa misy zavatra mampiahiahy.